Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSimon
Indawo entle yesitudiyo kwindawo esembindini phakathi komgama wokuhamba weevenkile kunye nezinto eziphambili. Igumbi elisezantsi eliqaqambileyo nelithambileyo kwisitrato sokuhlala esinamagqabi, nomnyango wangaphambili wokungena. Indawo yokuhlala ibanzi kwaye ifakwe kumgangatho ophezulu kakhulu. Ibhedi ephindwe kabini enoomatrasi obutofotofo kunye nelinen yokulala. Ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela. Le ndlu isisiseko esifanelekileyo seholide okanye uhambo lweshishini ukuya kwisixeko esihle sase-Edinburgh.
Eli gumbi lihle le studio liyinxalenye ye-Edinburgh Stockbridge Colonies
4.92 · Izimvo eziyi-256
Le ndlu ibekwe kwindawo ebizwa ngokuba zii-Stockbridge colonies, ezakhiwa kwisiqingatha sesibini senkulungwane yeshumi elinesithoba. Iikholoni zinobuhlobo kwaye zintle kwaye iStockbridge ngokwayo idlamkile kwaye inefashoni, kwaye ngaphakathi kohambo olufutshane lweSitrato sasePrinces kunye nezona zinto zinomtsalane.
I-Stockbridge yavotelwa indawo yesi-3 eNgcono yokuhlala e-UK yiCawe Times.
Indawo yam yesitudiyo ekuqaleni yayiyivenkile yegrosari yeekholoni kwaye yatshintshwa yaba yindawo yokuhlala ngeminyaka yoo-1980. Inemeko entle kwaye ikwindawo efanelekileyo yokuhlola i-Edinburgh.
Ndingakuvuyela ukukunceda ngocwangciso lwakho ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho njengondwendwe lwam kwaye ndikunike naziphi na iingcebiso onokuthi uzifune. Kungenjalo ukuba ukhetha ubumfihlo ke oku kuya kuhlonitshwa.